Kushandisa Yemagariro Tarisa-Ins yekufungidzira Retail Kuongorora | Martech Zone
Kushandisa Yemagariro Check-Ins yekufungidzira Retail Kuongorora
Mugovera, Kubvumbi 30, 2016 Chishanu, April 29, 2016 Douglas Karr
Isu taita kubvunza kwakawanda muindasitiri yedu nemakambani akagadzira matura makuru edata rakakosha. Kazhinji nguva, makambani aya anodenhwa kuti awedzere kukanganisa kwekushambadzira kwavo, kukura mugove wavo wemusika, uye kuzviita zvichibva pazvigadzirwa zvavo uye nezvipiriso zvebasa. Kana isu tikachera zvakadzika zvishoma mumapuratifomu avo, zvakadaro, tinoona kuti vatora makomo e data ayo asingashandiswe.
Heano mimwe mienzaniso mukati meindaneti Kushambadzira indasitiri:
Nei makambani ekutengesa emaimeri asiri kugona kuenzanisa kuchengetwa, tinya, vhura uye shandura dhata kune vatengi uye mabhizinesi kuyera kubudirira kwavo? Ini ndinofanira kukwanisa kuona nyore nyore kuti rondedzero yangu yekuwana uye yekuchengetedza kuyedza kunoenzaniswa kumakambani akafanana neakafanana firmagraphics kuti ndione kana ndiri kuita zvakanaka kana kwete.
Nei makambani ekutengesa emaimeri asiri kukwanisa kupa fungidziro yekufungidzira iyo inofungidzira kutengesa zvichienderana nekukura uye mhando yevanonyorera pane yako email runyorwa? Iwe unotomboziva kukosha kwevanyoreri vako zvichibva pane zvavo zvekare, chiitiko, jogirafi, uye huwandu hwevanhu?
Nei makambani ekutengesa emaimeri asingakwanise kuvaka epamhepo email marekodhi anongo gadziridza kero dzeemail pane maakaundi, kana kuvabvisa pavanobhuna pane imwe account? Nei iyo email yekutengesa kambani isingavabvunze kana vangada kugadzirisa ruzivo rwavo kune vese vakagovana vatengi pane imwechete chikuva?
Kana iwe ukatanga kuchera mune iyo data, iwe unobva watoona kuti zvinoshamisa zvakadii zvingave kuva nemaitiro aya uye data kune chero kambani. Fungidzira zvisarudzo iwe zvaungaite zvichibva pakuve nekuwana kune ungwaru kune vese vashambadziri pane silo remazita ako?
Heano mimwe mienzaniso mukati meSocial Media indasitiri:
Nei isina chikuva senge Twitter ichivaka chinongedzo chehungwaru? Kunyangwe paine chero mupfupisi kana anosimudzira chinongedzo, Twitter inogona kupa inopenga huwandu hwedhata iyo inogona kupa mushumo wakazara kumabhizinesi nezve kukanganisa kwezviri mukati mazvo, kusimudzira, uye zvirongwa zvekukurudzira. Fungidzira uchikwanisa kuona wakanakisa muti wedata unopa hupenyu hwese hwechisungo - kubva kuchizvarwa, kusvika kugovana, kusvika, kusvika, kubaya ... kune wese mushandisi weTwitter akagovana kana kuidzokorora ?! Ndakataura izvi kune bhizinesi svondo rapfuura uye vakati ivo vaizobhadhara zvachose kuwana iyi data. Pane kudaro, Twitter haipe chero chinhu uye isu tinomanikidzwa kuvimba nerima dhata uye chinongedzera mapfupi kuyedza kutsvaga kumashure iko kukonzeresa.
Heino muenzaniso unoshamisa zvachose kubva kuFreequare. Kana Chipotle paine nyaya nekuchengetedza chikafu, Makona mana akakwanisa kuongorora mafambiro etsoka munzira dzezvitoro uye pakupedzisira, fungidzira kurasikirwa:
Zvakaguma nei? Chipotle akazivisa kota yekutanga yaakawana uye fungidziro dzeFsquare dzaive pachinangwa - iine 30% kudonha mukutengesa. Makona mana aisakwanisa kungofungidzira kurasikirwa, ivo vanokwanisawo kufanotaura zvakashinga.
Isu tinotenda iyo 23% kuderera mune imwechete chitoro chetsoka traffic ndiyo nhamba ine chirevo iyo vanogovana vanofanirwa kutarisa nezvayo, pane kuderera kwe30% mukutengesa. Zvinotaridza kuti Chipotle iri kuvaka kuvimba kumashure nevatengi, izvo zvinonyanya kukosha pakubudirira kwayo kwenguva refu. Jeff Glueck, CEO weChina.
Ndinokukurudzira kuti uverenge Chinyorwa chaVaGlueck chose, zvinonakidza!
Zvimiro maringe neUngwaru
Ini ndakashanda pamwe nekambani imwe yakaunganidza zvinopfuura mabhiriyoni gumi nemaidioo mune hombe yedata yekuchengetera, asi ivo vainyanya kutarisisa kukura kwebhajeti yavo yekushambadzira kupfuura mhando uye kukosha kwedata ravaive vachiunganidza. Isu takavasundidzira zvakaoma kuchenesa iyo data uye nekuhaya musayendisiti wedata. Ivo havana uye kubvira zvavharidzirwa… negomo re data risina kubatwa raigona kuve rakakosha dai rakachengetedzwa zvirinani uye richerwa nemazvo.
Makambani akawandisa anoisa mari yakawanda uye anoisa mari yakawanda muzvinhu zvavo. Zvimiro zvinotonhorera, asi zvinogona nyore kuteedzerwa. Njere dzekubatsira vatengi kuhwina uye mabhizinesi kukwikwidza kwakakosha kupfuura chero chunk yekodhi.
Dhata chinhu chinoshamisa icho chisingafanirwe kuenda chisina kuzivikanwa nekuda kwezvikonzero zviviri:
simba - kuchera data rako uye kupa kwekutanga kutsvagisa kune ako indasitiri zvinzvimbo iwe semutungamiri
ukoshi - kupihwa sarudzo yechinhu chinoita kuti hupenyu hwevashandi huve nyore kana dhata inobatsira mukuru kuita sarudzo dzakanaka, ini ndinotora iyo data nguva dzese.
Ndeupi rudzi rwegoridhe wawakagara pamusoro?
Tags: big dataChipotletsoka trafficmativi mana akaenzanapredictive analyticsevanhu vezvenhau